"Ku Dhawaaqa Heshiiskiisa" - Jamaahiirta Arsenal Oo Ka Codsaday Maamulkooda Inay Deg Deg Ugu Dhawaaqaan Saxeexa Lionel Messi & Sababta Keentay - Gool24.Net
“Ku Dhawaaqa Heshiiskiisa” – Jamaahiirta Arsenal Oo Ka Codsaday Maamulkooda Inay Deg Deg Ugu Dhawaaqaan Saxeexa Lionel Messi & Sababta Keentay
September 9, 2019 Apdihakem Omer Adem
Miyuu Messi mar uun ku biiri doonaa Arsenal? Dabcan kubadda cagta waxkasta ayaa ka suurogala laakiin in Messi uu maalin uun xidho maaliyada casaanka iyo cadaanka ah ee Gunners ayaa noqon lahayd mid kamida heshiisyada ugu yaabka badan taariikhda.
Dhawaan ayay ahayd markii uu soo baxay war gilgilay kooxda Barcelona iyo jamaahiirteeda oo banaanka keenay in qandaraaska Messi uu ku jiro qoddob sheegaya inuu qaab xor ah kooxda kaga tagi karo dhammaadka xilli ciyaareed kasta.
Warkaas oo ugu horreyn kasoo baxay wargeyska ree Spain ah ayay intaas kaddib xaqiijiyeen madaxweynaha haatan ee kooxdaas ee Josep Maria Bartomeu iyo madaxweynaha mustaqbalka kooxda ee Gerard Pique.
Kaddib soo shaac-baxa warkaas, Qaar badan oo kamida kooxaha waaweyn ee Yurub ayaa durtaba bilaabay ka fikirka sidii ay xor ugu heli lahaayeen Messi balse waxaan sidoo kale meesha ka maqnayn jamaahiirta.
Tusaale ahaan, Qaar kamida jamaahiirta kooxda Arsenal ayaa durtaba madaxa kubadda cagta ee kooxdooda ee Raul Sanllehi ka codsaday inuu ku shaqeeyo mucjisadiisa oo uu Messi kasoo dajiyo Emirates Stadium.
Halkan Hoose Kaga Boggo Aragtida laba kamid ah jamaahiirta Arsenal ee codsaday saxeexa Lionel Messi:
Shaqsi kusoo gala barta Twitter-ka magaca ProfCymohAfc ayaa yidhi “Ku dhawaaqa heshiiska Messi” isaga oo guubaabinaya madaxda suuqa ee kooxdiisa.
Waxaa sidoo kale aragtidiisa ku daray taageere kale oo Gunners ah oo Twitter ku isticmaala magaca Just_Conway kaas oo yidhi “Ku dhawaaqa heshiiska Lionel Messi”.